गफ ! .....: December 2009
गजल : बार बार जस्लाई ढोगीरहेछु
यतिबेला मसँग केहि छैन, मेरो मतलब ब्लगमा लेख्नको लागी केहि छैन । छ त केवल केहि गजलहरु जो कुनै निक्कै अगाडी नै त कुनै हालसालै लेखिएका छन् । बाँकीकुराहरु लेख्नको लागी दिमाग शुन्य छ भन्दा फरक पर्दैन । दैनिकीका धेरै कुराहरुसँग जुध्ने तयारीमा सायद ब्लगमा राख्ने कुराहरु लेख्न एकप्रकारले विश्राममा छ दिमाग भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले यसपटक केहिदिन अगाडीको यौटा गजललाई नै प्रस्तुत गर्दैछु । यसको बारेमा पछिल्लो पटकको गजल लेख्दा नै अस्पस्ट थोरै कुरा उल्लेख गरेको थिएँ । त्यो बेलापनि यस्तै केहि नभएको अवस्थामा यौटा गजल टाँस्नको लागी भूमिका लेख्दैथिएँ तर जब भूमिका भन्न सक्ने टिप्पणीको पहिलो वाक्य लेखेँ तब मैले त्यहीँ अर्को गजल देखेको थिएँ र सबैकुरा छोडेर त्यो गजल पुरा गरेर मात्र त्यसपटकको गजल ब्लगमा टाँसेको थिएँ । आउनुस् आज त्यहि गजल पढौं । आफ्नै जोखाई अनुशार औसतमा दरिने यो लगायत मसँग अरुपनि ६ वटा गजलहरु तयार छन् जस्लाई म क्रमश भाँती मिलाउँदै राख्दै जानेछु ।
अनियमित दैनिकी भोगीरहेछु ।
लाग्छ म कस्तो मनोरोगी रहेछु ।
संगालेर राखुँ त म छरपस्ट,
नबटुलिने घोगाघोगी रहेछु ।
कोहि चिमोट यो चाम्रिएको छाला,
लौ घसें खरानी, म जोगी रहेछु ।
किन हुँदैछ टाढा मनको हरी,
बार बार जस्लाई ढोगीरहेछु ।
बुझेर पनि यो संसारको लिला,
म मन रुवाउने सोगी रहेछु ।
कि म जिन्दगीको यो कारखानामा,
निरन्तर सोच्ने उद्योगी रहेछु ।
Posted by दीपक जडित at 5:00 AM 13 comments: Links to this post
प्रसङ्ग - अन्तरालका कुराहरुको
एक त के अनेक भूमिकाले पनि बाँध्न सक्दैन रहेछ बिथोलिएको अवस्थितीलाई चाहे त्यो मनको होस् या अर्थोकै केहिको ।
समय - मैले हिसाब गर्न जाने देखि आजसम्म र यो तन्कँदै जानेछ म रहुञ्जेल
स्थान - मैले देखेजति आकाश र टेकेजति धर्ती
यो अन्तरालका कुराहरुको प्रसङ्गलाई अब थियो भन्ने कि छ भन्ने ? दोधारमा छु । यो दोधार छँदै थिएन जब मनमा लेख्ने तानाबाना बुन्दैथिएं तर लेख्दै जाँदा नितान्त ब्याक्तिगत कुराहरुलाई म यति महत्व दिएर किन लेखिरहेछु ? यो सब कुराहरुको अर्थ म स्वयंलाई बाहेक कति महत्वको छ र ? भन्ने जस्ता तर्कनाहरु उब्जँदै गए, कुनै बाली लगाईएको खेतमा झार पलाएझैं पलाएका तर्कनाहरु यस्तरी बलिया बनिदिए कि एक पटक हैन अनेक पटक मैले यौटा सानो अन्तरालका कुराहरु लेख्दै मेट्दै गरें र त्यसैले अर्को अन्तराल बनाउँदै गयो । हो रहेछ, अन्तराल यसरी नै बन्दो रहेछ । हामी निरन्तर प्रयासरत हुन्छौं जीवनका कुनै पक्षमा अन्तराल नबनोस् र त्यसको अप्ठ्याराहरु सामना गर्नु नपरोस् भनेर तर त्यहि प्रयासले अर्को अन्तराल निर्माण गरिरहँदो रहेछ र हामी जीवनमा आफैंले बनाउन पुगेका अन्तरालका गहिरा गहिरा खाडलहरुमा पुरिइरहँदा रहेछौं । ति खाडलहरु घातक नै हुन्छन् भन्ने पनि छैन । निस्कन्छौं, उम्कन्छौं ति खाडलहरुबाट तर उम्कनलाई गरेको प्रयासले या भनौं प्रयासरत रहेको समयावधीले फेरी अर्को खाडल निर्माण गरिसक्दोरहेछ र धकेल्दोरहेछ हामीलाई फेरी अन्तरालकै खाडलमा ।
प्रक्रिया उहि उस्तै चलिरहने निरन्तर जिन्दगीको र त्यसमा प्रत्येक पल भए/गरेको नयाँ देख्न नसक्ने हामी मुर्ख मनुवाहरु ।
यौटा निश्चित समयावधीको अन्तरालका कुराहरु उप्काउन खोज्दै जाँदा क्रमश आजसम्मकै जीवनका अन्तरालहरु उपस्थित हुँदै गए र म अन्यौलमा फँस्दै गएं कि कुन कुरालाई लेखुँ ? लेखिसकेका धेरै कुराहरु त मेटिसकेको छु । के अब सबै सुरुवातबाट लेखुँ ? अहँ यो यति सजिलै लेखिने कुरा होईन । यस्तै मात्र लागिरहयो, त्यसो त यहाँनेर पनि अन्यौलमा छु म, यो यस्तै लागेको नै हो कि अथवा मैले यस्तो लाग्नुलाई जोड दिएको हो ? लेख्दै जाँदा थपिँदै गएका कुराहरुले कि त मेरो लेखलाई भद्दा बनाउने छ या त जति लेखेर पनि यो अधुरो नै रहने छ । निचोड यस्तै बन्यो ।
लेख्न खोजिएको अन्तरालको कुरा लेख्ने नै हो भने दुई वाक्यांसमा लेखिएला तर अन्तरालका कुराको सीमा वृहद बन्दै गयो । थपिंदै गए अन्तरालहरु र म केवल गोडा पाँचेक हरफमा आफ्ना कुरा लेख्ने ब्लगर(लेखक नै भनुँ न) रहिनं । म स्वयं यौटा यस्तो पात्र बनें जस्ले भोगाईको हकमा जीवनका सबै यामहरु भोगेको छ र अन्तरालका कुराहरुमा ति सबै यामहरुको उपस्थिती आवश्यक छ । जो नफुल्नु खुशी फुलेको छ, नदुख्नु पीडा दुखेको छ र ति खुसी र पीडाका क्षणहरुले पनि अन्तरालका कुराहरुमा आफ्नो वर्चस्वको हकदाबी गर्दछन् । जब थोरै कुराहरु भन्न खोज्दा अर्थात लेख्न खोज्दा आफुलाई यस्तो अवस्थामा पाईंदोरहेछ तब लाग्दोरहेछ कि त यो लेख्नुको औचित्य छैन या फेरी लेख्ने समय नै भएको छैन ।
त्यसो त एक ब्लगर भएर मैले आफुलाई एक खुल्ला किताब भनेको छु । यो मलाई लाग्छ - म मात्र हैन हामी सम्पुर्ण ब्लगरहरु नै यौटा खुल्ला किताब सरह हौं जो आफ्ना मनका अक्षरहरु, ति जतिसुकै नितान्त ब्याक्तिगत किन नहुन ब्लगका पानामा कुनै न कुनै माध्ययमले छाप्ने गर्छौं र अलिकति राहतको स्वास फेर्छौं । यस्तो सोच्दासोच्दै, अनायस कति कुराहरुमा हामी मनका अक्षरहरुलाई ब्लगका पेजहरुमा हुबहु फोटोकपिझैं उतार्न सक्दैनौ पनि । भनौं न ब्लग मनको ऐना हो भने मनको अक्षर त्यसमा देखाउनलाई प्रतिविम्बित मात्रै गरेर पुग्दैन, त्यसो गर्दा त्यो उल्टो देखिन जान्छ यसर्थ हामी मनका अक्षरहरुलाई अरुले बुझ्ने गरेर र धेरैजसो चैं आफुले अरुलाई बुझाउन चाहे अनुशार आकार/प्रकारमा फेरबदल गर्ने गर्छौं । ब्याक्तिगत कुराहरुको लेखाईमा यो प्रयास प्रायस सबै ब्लगरहरुमा लागू हुन्छ । जस्तै मलाई नै भै रहेछ ।
अन्तरालका कुराहरु लेख्ने जमर्कोमा म ति नै अन्तरालका गहिरा खाडलहरुमा यसरी खसुँला भन्ने कहाँ थियो र ? लेख्दैथिएँ सरर सरर मानौं कि ममा उस जूगका महान लेखन्दास गणेशकै जस्तो बिद्युतिय लेखन शक्ति छ तर लेख्दै जाँदा महसुस हुँदै गयो लेखन्दास बन्ने शक्ति हुनु र लेखक बन्ने शक्ति हुनु दुई पृथक कुराहरु हुन् । प्रसंग उप्किंदा अलिकति गणेशको बारेमा बोलीहालुँ - त्यत्रो विद्युतिय गतिमा लेखन शक्ति भएका गणेशले किन यौटा पनि आफ्नो कृति लेखेनन् होला ? आफ्नो यौटा पनि कृति नलेख्ने गणेशको कस्तो बिद्युतिय गति थियो होला त लेख्ने ? के गणेशसँग कम्प्युटर थियो छिट्टो लेख्नलाई जस्तो अहिले मैले प्रयोग गरिरहेछु ? त्यसो हो भने गणेशसँग द्रुत गतिमा लेख्ने बिद्युतिय शक्ति हैन साधन थियो भन्न पर्छ होला सायद र साधन प्रयाप्त भएर मात्र निर्माण हुन्छ भन्ने जरुरी छैन । कृति तयार गर्नु एक प्रकारले निर्माण न हो जहाँ यथेष्ट परिकल्पनाको खाँचो पर्छ । त्यसैले गणेशले आफ्नो कृति लेखेनन् होला । आँखिर उनि परिकल्पना प्रेमी भन्दा पनि परिक्रमा प्रेमी त दरिएकै हुन् । लगभग त्यस्तै नै अवस्था होला मेरो यो अन्तरालका कुराहरु लेख्नु जो म साधन भएर मात्र लेख्न सकिरहेको छैन । सायद ब्यापक परिकल्पनाको खोजीमा छु ।
अन्तरालका कुराहरु लेख्ला यो ज्यानले । म आशावादी छु आफैंसँग । त्यसले समय लेला । त्यसको स्वरुप अहिले मैले कल्पना गरेको भन्दा अलग होला तर अन्तरालका कुराहरुले मनमा एक प्रकारको जुन घर बनाउँदैछन् तिनले पूर्णता पाएपछि त्यो अवश्य लेखिएला कुनै न कुनै उपायले । अहिलेलाई अन्तरालका कुराहरु मध्येको यौटा कथा एक हरफमा लेख्दैछु साथमा यौटा तस्विर राखेर । यो लेख्दिंन, लेख्नेबेला भएको छैन ईत्यादी ईत्यादी प्रतिको अन्तरविरोध हो अर्थात बनाउँदैछु । कथा भनिसकेपछि यौटा शिर्षक पनि चाहियो भनेर यो कथालाई 'जीवन साथी' शिर्षक दिएको छु ।
'जन्मेदेखि आज पर्यन्त कहिल्यै नछोडी सँगै लिएर हिँडीरहेको जीवनले थाहै नपाई बनाएका अन्तरालका गहिरा गहिरा खाडलहरु माझको कतै पुगेर साथी भेटाएको छ - जीवन साथी ।' यो फोटो कथा यति नै ।
फोटोको सम्बन्धमा: यो मेरो दोश्रो विवाहको तस्विर हो र उपज जीवन-अन्तरालकै ।
क्रमश...........(भलै यसको अत्तोपत्तो छैन ।).................
Posted by दीपक जडित at 4:47 PM 11 comments: Links to this post
गजल : ब्यर्थै तिम्रो ईश्वरलाई
अनियमित दैनिकी भोगीरहेछु । .........'यो वाक्य लेखिसक्ने बित्तिकै म रोकिएँ । एकैछिनलाई हैन धेरैबेरलाई । के गरेँ त रोकिएर ? यसको कथा पछि फेरी अर्को ब्लगमा भनुँला ।...........' त्यसैले ब्लगमा सोचे जसरी प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । लामो अन्तराल पछि ब्लगमा भोलीको भूमिका भनेर लेखेको थिएँ । जस्को प्रतिक्रियाले मुख्य भन्न खोजेको कुरा अझै सशक्त ढँगले भन्नुपर्ने दवाव दिएको छ । त्यसलाई निरन्तर लेखिरहेको छु तर पुरा गर्न सकेको छैन । त्यहि लेख्दालेख्दै 'सुर्काउने गाँठो जिन्दगीको' भन्ने कविता लेखेँ र ब्लगको एक पेज थपें । यसपल्ट पनि म अन्तरालका कुरा लेख्न बसेको थिएँ तर लाग्यो त्यो म एकैछिनमा एक टुक्रा कविता लेखे जसरी वा यौटा गजल जबर्जस्ती पुरा गरे जसरी पुरा गर्न सक्दिंन । त्यसैले ब्लगमा अर्को पेज थप्नको लागी निक्कै पहिले लेखेको तर फुर्सद नपाएर ब्लगमा चढाउन नभ्याएको यौटा गजल लिएर आएको छु । यसको पहिलो शेर(मतला)लाई निक्कै पहिले फेसबुकमा लेखेको पनि थिएँ ।
गलत् भनिंन तिमीले पूजिरँ'दा पत्थरलाई ।
नलगाउ मेरो कुरा ब्यर्थै तिम्रो ईश्वरलाई ।
नटेक्दैमा मठ्-मन्दिर हुन्न म अनिश्वरवादी,
सकेको छु मैले मान्न मन्दिर आफ्नै घरलाई ।
के हिसाबले भन्छौ तिमी द्यौता आफ्नै मात्र पेवा,
उसले आफ्नै ठान्छ भने जगत् चराचरलाई ।
मन्दिर धाई फिर्दा अरु मान्छे होचो देखेसम्म,
खेद ! रहनेछ द्यौता ढोग्ने ति दुई करलाई ।
तिम्रो पूज्य ईश्वरमात्र हैन मान्छे पनि हुन्छ,
सक्यौ हटाउन भने यदि मनको 'तर'लाई ।
ईश्वरत्व त्यसमा पो छ जस्ले सक्छ अहँ त्यागी,
स्विकार्न 'यो धर्तीका सब जीव बराबर'लाई ।
Posted by दीपक जडित at 3:58 AM 8 comments: Links to this post
कविता : सुर्काउने केहि गाँठोहरु जिन्दगीका
सुर्काउने केहि गाँठोहरु
फुस्कँदै गए जिन्दगीका
मानौं सबै सबै नै थिए ति
यसैगरी फुस्कनलाई सहजै
जालान कतिहरु त अझै
फुस्कँदै झनै हेलैसँग
क्रमै अनुशार सुरुरु सुरुरु
बाँधिएकै थिएनन् कतैपनि गाँठोहरु
कुनै साईनोहरुको ।
अर्थात साईनोहरु जिन्दगीका
बाटिँदै पोया पोया डोरीझैं
कसिँदै गए जिन्दगीका
भनौं यि पनि हुन सबै सबै
यसैगरी कसिनलाई सजिलै
कसिंदै झनै मेलैसँग
क्रमै अनुशार टिमिक्क टिमिक्क
फुक्नै पर्दैन कहिल्यै पनि गाँठोहरु
फगत सुर्काउने गाँठोहरु हुनभने
किन रुन्छु बेस्सरी
यौटा सुर्काउने गाँठो
किन फुर्किन्छु बेस्सरी
यौटा सुर्काउने गाँठो ।
Posted by दीपक जडित at 2:05 AM5comments: Links to this post
यो केवल भूमिका हो भोलीको
हिसाब कैले पो गरिएको थियो र जिन्दगीलाई ? बेहिसाब यो जिन्दगीको पनि तर हिसाब खोज्न लागिंदोरहेछ कैलेकाँही । भनौं न जिन्दगीलाई हिसाब नगरी त राखिएकै थिएन । यहिँनेर जिन्दगीको केरमेट सुरु हुन्छ र पत्तै लाग्दैन कहाँ कैले के लेखियो र मेटियो । गर्दै नगरेका कामकुराहरुको पनि हिसाब निस्कन्छ कैले जिन्दगीमा त कैले एक एक हिसाब संगालेको जिन्दगी पनि बेपत्ता हुन्छ जिन्दगीबाट । कैलेदेखि आफुलाई हराएं ? कैले आफुलाई भेटाएँ ? कस्तो अवस्थामा जिन्दगीलाई छोडेको थिएँ ? र भेटाउँदा जिन्दगी कस्तो भयो ? नढल्नु अर्कै कुरा हो तर रिँगटा छुटट्छ जिन्दगीको हिसाब मिलानमा तब भनिंदो रहेछ - हिसाब कैले पो गरिएको थियो र जिन्दगीलाई । सायद जिन्दगीको भाउन्नबाट छुटकरा पाउन यसो भनिन्छ तर के पाईन्छ त छुटकरा जिन्दगीको भाउन्नबाट ? अहँ मलाई त पट्टक्कै लाग्दैन जबसम्म कोसिस गरिन्छ मिलाउन तबसम्म जिन्दगीको हिसाब किताबको झमेला कायम रहन्छ जब कोसिस गर्न बन्द हुन्छ तब झमेला पनि समाप्त हुन्छ ।
यसको गहिराईमा नगएकै राम्रो अहिले । अथाह गहिराई भएर पनि जिन्दगी आँखिर सतहमै समाप्त हुन जान्छ । हामी सतहबाट न माथी उठ्न सक्छौं न तल तल गहिराईमा पुग्न सक्छौं । जति पुगेका छौं भन्छौं त्यो केवल भ्रम हो भन्छु म । प्रकाश सायमिको शब्द सापटी लिएर भन्दा जिन्दगीको गोबर झ्याउलोमा लुट्पुटिएर म कतिखेर गोब्रेकिरो भएर जिन्दगी देखि हराएँ र आज जिन्दगीको धागो समाएर आएँ ? यत्तिकुराले फेरी ब्लगमा जोडिने कोसिस गर्दैछु वास्तवमा म । त्यसभन्दा पर जिन्दगीको कुरा त कुरै मात्र न हो ।
लामो भएको हो यो अन्तराल । समयको यो लामो अन्तराल यतिखेर एकै गुजुल्टो भएर डल्लिएको धागो जस्तै हत्केलामै खेलाउन सक्ने भएको छ । यो कस्तो भने भनौं न सर्सर्ती सम्झिएको यो अन्तराल भरीको समय चैं डल्लिएको धागो र अलि बिस्तारमा त्यही समयलाई सम्झिंदा चैं त्यही धागो फुकाएर बिस्तारमा तन्काईएको जस्तो ।
यस अन्तरालभित्रका कुराहरु कहाँबाट सुरु गर्ने ? खोतल्ने मेसो नै हराईसकेको झैं भएको छ । हुनपनि यस अन्तरालमा धेरै उथलपुथल र फेरबदल भयो जिन्दगीमा । तिहार थियो त्यो बेला जब मैले पछिल्लो टाँसो तिहारकै बारेमा लेखेको थिएँ । तिहारको टाँसो चढाईसकेपछि अनेक पल्ट अनेकथरी कुराहरु लेखें तर ब्लगमा राखिँन फलत समयले त्यसमध्ये कतिलाई पुरानो बनाईदियो कतिलाई तर्साएर सातो लियो ओभरडोज हुन्छ भनेर । कठै ! ओभरडोज हुने डरले सातो उडेका मेरा ति रचना सामाग्रीहरु पछि कालोनीलो भएर तर्साउने समयले नै ओभरडोज खाएको ट्वाल्ल परेर हेर्न बाध्य भए । अब म क्रम मिलाउने छु ताजगी भरेर तिन्लाई ओकल्ने । अहिले त म मात्र भूमिका लेख्न बसेको रहेछु हो यो केवल भूमिका हो भोलीको ।
केहि सम्हालिन त देउ मलाई
दुरुस्तै बुझाउंन नसकुँला
तर लगभग हिसाब राखेको छु तिम्रो
भाचुँला औंलाहरु, नसके
गनेर आँख्ला आँख्ला औंलाहरुको
तिम्रै गन्ती गरीगरी
निकाल्नेछु हिसाब आफ्नै जिन्दगीको ।
Posted by दीपक जडित at 1:53 AM 8 comments: Links to this post